Nepal Dayari | ईन्द्रेणिका छत्र शाहिको स्वास्थ्य अवस्था झनै ख’राब,भर्खरै आयो यस्तो खबर !
ईन्द्रेणिका छत्र शाहिको स्वास्थ्य अवस्था झनै ख’राब,भर्खरै आयो यस्तो खबर !
साउन ३०, २०७८ शनिबार २८४५ पटक हेरिएको
ईन्द्रेणिका छत्र शाहिको स्वास्थ्य अवस्था झनै ख’राब,भर्खरै आयो यस्तो खबर
चर्चित कार्यक्रम इन्द्रेणीका छत्र साहीलाई काजल जोसीले लाई औषधि र पानी खुवायको टिकटक भिडियो निकै भाइरल भयको छ। छत्र साहीले केही दिन अगाडि आफू अस्वस्थ भयको भन्दै सामाजिक सन्जालमा स्टाटस राखेका थिय। लगत्तै उनलाइ स्वास्थ्य लाभको कामना गर्नेहरू समेत निकै देखीन्थ्यो। फेसबुकमा पोस्ट अनि फोटाहरु पोस्ट्याउदै धेरैले स्वास्थ्य लाभको कामना गर्नुभयो।
अहिले भने उनी लाई सन्चो नभयकै कारण हुन सक्छ काजल जोसीले उनको हेरचाह गरेको देख्न अनि अनुमान धेरैले लगायका छन। छत्र साहिको टिकटक मार्फत अप्लोड भयको उक्त भिडियोमा समेत धेरैले स्वास्थ्य लाभको कामना गरेको देखीन्छ भने उक्त भिडियो अहिले सामाजिक संजालहरुमा समेत छर्पट्ट छरीयको छ। यो सबै छत्र साहिको मायाको कारण नै होला यति धेरै दर्शकको चासो हुनुमा पनि।
अझै भन्ने हो भने छत्र साही र काजलको माया प्रेमको कुरा बजारमा चर्चा चलिरहदा अहिले काजलले छत्र प्रती देखायको माया अनि हेरचाहले गर्दा पनि धेरै दर्शक श्रोताहरु निकै खुसी भयको समेत देख्न सकिन्छ भने छिटै निको भयर यो जोडि सदाका लागि एक भयको समेत देख्न चाहने धेरै पाउन सक्छौ। छत्र साही र कजाल इन्द्रेणीका निकै प्यारा कलाकार हुन जसले गायका गितहरु अर्थत दोहोरीलाइ लाखौ दर्सकहरुको नजर पुग्ने गर्दछ। जसका दोहोरीका टुक्काले प्राय सबैलाइ मोहितनै गराउने गर्दछ।
अझै छत्रले केही समय अगाडि हामिसीत कुरा गर्ने क्रममा भनेका थिय, काजल र छत्रको बिहे भय खर्चको जोह हामी नि केही सहयोग गर्न सक्छौ। यस्ता कुराले पनि छत्र र काजल प्रती दर्शक श्रोताहरुको माया अनि प्रेरणा धेरै भयको देख्न सकिन्छ। छत्र साही प्राय सबै शीत मीठो बोल्ने र आफुले गरेको बिगतको संघर्सलाई कहिल्य नभुल्ने खालका ब्यक्ती हुन। उहालाई हामी सबैको तर्फबाट सुस्वास्थ्य लाभको कामना । हरेकपलको खबर बाट